एक पिताले आफ्नी छोरी’लाई भनेको कुरा, जुन पढ्दा आँसु आउन सक्छ ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नु’होला] – List Khabar
Home / समाचार / एक पिताले आफ्नी छोरी’लाई भनेको कुरा, जुन पढ्दा आँसु आउन सक्छ ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नु’होला]
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 253 Views
छोरीः बाबा मैले स्क्रेच गार्ड र कभरको अर्डर दिए, बाबाः तिमीलाई यस्तो गर्न कसैले बाध्य गर्यो कि आफैं गरेको ? छोरीः होइन,कसैले पनि गरेन, बाबाः आइफोन निर्माता कम्पनीको बेईज्जती गरेको जस्तो लाग्दैन तिमीलाई ?
छोरीः लाग्दैन,बल्कि निर्माता स्वयंले नै कभर र स्क्रेच गार्ड लगाउने सल्लाह दिएको थियो। बाबाः त्यसो भए त आइफोन नै देख्नमा खराब देखिन्छ होला, त्यसै कारण तिमीले कभर मगाएको होला है ? छोरीः होइन बाबा, परन्तु आइफोन खराब न होस भनेर मगाएको हो ।
Previous चुनावमा केपी ओलीको नेकपा एमालेको भन्दा एक सिटै भएपनि बढि नै ल्याउछौंः रामकुमारी झाँक्री
Next २० ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् घर !